Jamie Redknapp oo shaaciyey halka arrin ee Kooxda Liverpool ka horjoogsan karta hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Liverpool) 11 Nof 2019. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool, Jamie Redknapp ayaa shaaciyey halka arrin ee Reds ka horjoogsan karta hanashada horyaalka Premier League kal ciyaareedkan.
Kaddib guushii muhiimka ah ahayd ee ay xalay ka gaareen Manchester City markii ay 3-1 uga adkaadeen ayaa haatan siddeed dhibcood oo nadiif ah ku haysa hoggaanka horyaalka Premier League.
Waxaa intaa u sii dheer inay joogteeyeen rikoorkooda guuldarro la’aanta ee fasal ciyaareedkan, iyadoo aan laga adkaan 12 kulan oo ay illaa iyo haatan ciyaareen horyaalka Ingiriiska.
Kaddib markii ay khasaaro kala kulantay xalay kulankii ka dhacay garoonka Anfield kooxda Manchester City ayaa si rasmi ah u saldhigatay kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka, waxaana ay ka dambeeyaa kooxaha isku dhibcaha ah ee Leicester City iyo Chelsea.
Si kastaba ha noqoteen Redknapp oo 11-sanadood ku soo qaatay garoonka Anfield ayaa rumaysan in kooxdiisii hore ee Liverpool ay tallaabo weyn u qaaday hanashada horyaalka Premier League, balse waxa kaliya oo ka hor’istaagi kara ay tahay inay dhaawacyo halis ah la kulmaan ciyaartoydeeda.
Isagoo arrintaas ka hadlayey Redknapp ayaa waxa uu yiri: “Liverpool ayay ku xiran tahay inay horyaalka lumiso, bishii hore ayaan sheegay kaddib markii ay Manchester City 2-0 ugu guuladarraysatay garoonkeeda Wolves ee ay iyaguna 2-1 ku garaaceen Leicester City, guushii shalay ee Anfield kaliya aaminaadaydii ayay xoojisay.
“Siddeed dhibcood waa farqi wayn, marka laga reebo dhaawacyo waali ah, Liverpool si wanaagsan ayay u haysaa wadadii loogu caleemo saari lahaa horyaalka”.